सामाजिक मिडिया को बारे मा के खास छ? | Martech Zone
शनिबार, अप्रिल 2, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
गत हप्ता, मैले यो एउटा कारण उल्लेख गरे सामाजिक मिडिया असफल थियो धेरै मार्केटरहरू यो किनभने हामीले जादुई एल्गोरिथ्मलाई चिन्न सकेनौं। मलाई अझै पक्का लाग्दैन कि त्यहाँ जादुई एल्गोरिथ्म छ ... तर यस हप्ता पछि, म सामाजिक मिडियाको विशेष गुणहरू मध्ये एकलाई देखाउन सक्छु। यो हो समस्याका.
अर्को सेक्सन व्यक्तिगत प्रकारको छ ... त्यसैले यदि तपाईं यो अलि बढी महसुस गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई अनुभागमा जानुहोस्!
मेरो हजुरबुबाको घाटाको बारेमा
यो महिना कुनै न कुनै भयो। केही हप्ता पहिले मैले हाईस्कूलको एक असल साथीलाई गाडेँ। र हिजो, हामीले परिवारको कुलपति र मेरो नाम मेरो नाममा राखेका मानिस, मेरो हजुरबुबा, डगलस मोर्ले। मलाई थाहा छ धेरै मान्छेहरु का केही अविश्वसनीय हजुरबा हजुरआमा छन् ... तर मेरो हजुरबुबा एकदम अद्वितीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उनले क्यानाडाको शाही सेनामा भर्ना गरे र दोस्रो विश्वयुद्धमा सेवा गरे। उनी विस्फोटक विशेषज्ञ थिए, उनलाई कमाण्डन र कप्तानको ओहदामा सेवानिवृत्त गरिएको थियो। त्यस्तो समयमा जब यो एकदम लोकप्रिय थिएन, उसले एक सुन्दरी गोरी यहूदी महिलासँग विवाह गर्ने छनौट गर्यो - मेरी हजुरआमा, सिल्भिया।
मेरो हजुरआमा साथ साथै एक अद्वितीय, मजबूत महिला थियो। २०० 2003 मा उनको मृत्यु नहुँदासम्म उनी परिवारको शान्त मातृत्विका थिइन। मेरो हजुरबुबाले युरोपभरि सेवा गर्दा, मेरो हजुरआमाले एक सफल कम्पनी बृद्धि गर्नुभयो - त्यो समयको बारेमा अनसुना। मेरो हजुरबा हजुरआमाको पूजा गर्नुहुन्थ्यो…। र म त्यो हल्का भन्न सक्दिन। जब मेरो हजुरबुबाले wife 58 बर्षको सुन्दर विवाह पछि श्रीमती गुमाउनु भयो, उनले त्यो लेखे पखेटा कि उसलाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उडान मद्दत गरीएको थियो काटिएको थियो। मलाई यकिन छैन कि मैले कहिल्यै त्यस्तो व्यक्ति देखेको छु जो एकदम शर्त, निःस्वार्थ भई आफ्नी पत्नीप्रति समर्पित थिए।
उनको स्वास्थ्य असफल भएपछि, हजुरआमालाई पर्ख्ने हरेक मौका मेरो हजुरबुबाले छोडिदिनुभयो। उहाँ कहिल्यै हिचकिचाउनु भएन - आफ्नै फिर्ता समस्या र स्वास्थ्य मुद्दाहरूको साथ पनि। जब चीजहरू साँच्चिकै कठिन भए, उनले उनलाई एक धर्मशालामा हाले। केही दिन पछि, ऊ कसरी हेरविचार गरिरहेको छ र घर पछाडि घर कोठा स्थापना गर्न मन पराउँदैन थियो। उहाँ दिन रात उनको ओछ्यानमा हुनुहुन्थ्यो। ऊ मान्छेहरु पनि उनको न nails र कपाल गर्न को लागी आएका थिए। यो आश्चर्यजनक केहि छोटो थिएन।
अन्त्येष्टिमा मैले धेरै मानिसहरूलाई भेटे जो मेरो हजुरबुबाले छोए। माली जस्तै जो अंग्रेजी बोल्दैन जुन मेरो हजुरबुबाको घरको हेरचाह गर्दछ। मलाई कहिले पनि थाहा थिएन कि मेरो हजुरबुबाले त्यस व्यक्तिको व्यापारमा लगानी गरेको थियो। मैले उनको केयरटेकरलाई भेटें, एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला जसले उनको कफिनमा कराई र मलाई बताइन् कि उनले मलाई कुनै व्यक्तिले बढी माया कहिल्यै गरेको थिएन। मैले उनको रब्बीलाई भेटें, जो उहाँसँग हजुरआमा बितिसकेपछि अध्ययन गर्न जारी राख्नुभयो (यद्यपि उहाँ प्रोटेस्टेन्ट नै रहनुभयो)। त्यहाँ संसार भरबाट मान्छेहरू आयो वा उनीहरूको शोक-सत्कार पठायो। मेसनहरू आयो र उनीहरूको औपचारिकता दियो भाइलाई बिदाइ गर्नुहोस्। अमेरिकी सेनाका सदस्य आए र अर्को बृद्धिमानलाई महान् पीढीबाट गुमाएकाहरूलाई श्रद्धांजलि अर्पण गरे।
मेरो हजुरबुबालाई उनको पोशाकको पोशाकमा गाडिएको थियो ... र सँधै जोकर, उनी पनि डोरबेल स्विचको साथ गाडिएका थिए जब उनी उठे घटनामा उनले सोधे (उनले आफ्नो नातिलाई भने कि उसले यसलाई तारमा गइरहेको थियो अनियमित रूपमा जानुहोस् जब मेरो आमा चिहानमा जानुभयो!)। बॅगपाइपर खेले पछि भगवान रानी बचाउनुहोस् र अन्तिम पोष्ट... बैगपाइप्सको एक अविश्वसनीय रेन्डिसनको साथ जलाइएको हवा नागीला। हामी सबै खुशी मनायौं र हाँसे, हामी सबैले एउटा च्यासु ... र हामी सबै मुस्कुरायौं र एउटा अविश्वसनीय मानिसलाई बिदाइ दियौं।
मलाई पक्का विश्वास छैन कि कसैलाई पनि त्यस्तो अनौंठो र अद्भुत श्रद्धांजलि दिएको छ। यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि मेरी आमा, जसले निःस्वार्थ भई यी केही वर्षहरुमा रात र रात उनको स्याहार गरे, यो अविश्वसनीय फेयरवेल योजना बनाए।
सोशल मिडियामा फर्कनुहोस्
जब मैले लेखें कि मेरो हजुरबुबा फेसबुकमा जानुभयो, सयौं मानिसहरूले टिप्पणी गर्न समय लिए। मैले ईमेलहरू, पाठ सन्देशहरू, ट्वीटहरू, फोन कलहरू र व्यक्तिगत नोटहरूको जलप्रलय प्राप्त गरें। त्यसबेलादेखि मैले धेरै भाग लिएको छैन ... परिवार अहिले कुञ्जी हो र मेरी आमालाई समर्थन गर्ने (एक मात्र बच्चा) मेरो ध्यानको केन्द्रित भएको छ। मेरो ग्राहकहरु, साथीहरु, र अनुयायीहरु को सबै मेरो समर्थन गरीरहेको छ समय सकियो सामाजिक हुनुबाट। शब्दहरू व्यक्त गर्न सक्दैन कसरी उडाएको म तपाईंहरू मान्छेहरूबाट छु। धन्यवाद।
म यो कुनै पनि समानुभूति र सहानुभूतिका लागि लेख्दै छुन ... म मात्र थाँहा गर्न चाहान्छु जब म सक्छु र तपाईहरूसँग बाड्न सक्दछु किन म शान्त छु। म विश्वास गर्छु मेरो हजुरबुबाको जीवन साझा र मनाइएको छ, शोक छैन।
साथै, यो मलाई सामाजिक मिडिया को बारे मा के विशेष हुन सक्छ बुझ्ने बनाएको छ। मैले सधैं शब्दको साथ कुनै नराम्रो समय बिताएको छु मंगनी... यो प्रिमेडेटेड र निर्मित ध्वनि गर्न सुरु भयो। विलोपन सगाई जस्तै छैन। सगाई दुई इच्छुक पार्टीहरू बीच हुन्छ ... जोखिम हुन्छ जब एउटा पार्टीले अर्कोलाई आफै खोल्छ। कमजोरीले तपाईंलाई अपमान, गिल्ला र सम्भावित आलोचनाको लागि पनि खोल्न सक्छ। तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्भावितताले तपाईंलाई तपाईंको दर्शकहरूसँग स्तरमा जडान गर्नको लागि खोल्छ जुन कुनै अन्य सञ्चार माध्यमहरू प्रदान गर्न सक्दैन। कमजोर हुनु कुनै पनि मार्केटिंग स्क्रिप्टमा लेख्न सकिदैन।
त्यो सोशल मिडियाको बारेमा के खास हो।
अप्रिल 2, 2011 मा 9: 00 एएम
मेरो निष्कपट श्रद्धाञ्जलि ओले मित्रलाई। तपाईंको हजुरबुबा एक अचम्मको मान्छे जस्तो लाग्छ। काश मैले उनीसँग भेट गर्ने सुअवसर पाएको हुँ। तपाईं आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई जान्ने भाग्यशाली हुनुहुन्थ्यो। मेरो सम्झना गर्न म धेरै जवान थिए जब मेरो मृत्यु भयो। त्यसैले सम्झनालाई कदर गर्नुहोस्।
अप्रिल 2, 2011 मा 2: 55 PM
धन्यवाद बीबी! ऊ एक महान मान्छे र क्यानेडाली देशभक्त थियो!
अप्रिल 2, 2011 मा 9: 42 एएम
म marketing० बर्ष को लागी मार्केटिंगमा छु। सोशल मिडियाले मात्र कार्य गर्दछ जब प्रत्यक्ष संलग्नता र वास्तविक संचार हुन्छ। मलाई यो मनमोहक लाग्छ कि यो प्रायः एक जादूको गोलीको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। सगाई र वास्तविक संचार बिना यो व्यर्थताको व्यायाम हो। अनुयायीहरूको संख्या त्यो सगाईको गुणस्तरमा गौण हो।